Sababta Dhabta Ah Ee Ay Man City Uga Hartay Alexis Sanchez Oo La Ogaaday, Guardiola Ayaa Ka Dambeeyay – Kooxda.com
Home 2018 January Ingiriiska, Wararka Maanta Sababta Dhabta Ah Ee Ay Man City Uga Hartay Alexis Sanchez Oo La Ogaaday, Guardiola Ayaa Ka Dambeeyay
Sababta Dhabta Ah Ee Ay Man City Uga Hartay Alexis Sanchez Oo La Ogaaday, Guardiola Ayaa Ka Dambeeyay
Kooxda Man City ayaa isaga hartay baacsiga xiddiga reer chile ee Alexis Sanchez kadib markii uu tababare Pep Guardiola u sheegay in aanu doonayn in uu xiddigu kooxda ku soo biiro inta lagu guda jiro suuqa January sida ay sheegayaan wararku.
Sababta uu tababare Guardiola u diiday in uu xiddiga la soo wareega suuqa Janaury ayaa ah in uu ka cabsi qabay in uu muran iyo khal-khal ku abuuro qolka labiska kooxda lana qabsan waayo kooxdiisa.
Guardiola ayaa marnaba ku qanacsanayn in uu xiddigiisii hore ee Barcelona la soo saxiixdo bartamaha xilli ciyaareedkan
Haa waxa uu xiddiga si aad ah u doonayay xagaagii waxana uu ka gudbiyay dalab lacageed oo dhan 60 milyan oo euro, waxana uu si weyn ugu faraxsanaa in uu si xor ah ku helo xagaaga dambe.
Laakiin waxa uu wel-cel ka muujiyay imaanshihiisa suuqa January waxana uu si khaas ah madaxada Man City ugu sheegay in ayna u dhaqaaqin adeegiisa.
Waxa uu milkiilaha kooxda iyo waliba agaasimaha kooxda u sheegay in uuna ku qanacsanayn kuna faraxsanayn fikrada ah in ay kooxdu haatan la soo saxiixato xiddiga.
Imaanshaha xiddigan reer chile ee Etihad ayaa la macno ahayd in uu qaadan doono mushahar aad u sareeya kana badan xiddigo muhiim ka ah kooxda furena u ah guulaha ay haatan gaartay waxana uu ka baqay in ay arintaas ka caraysiiso xiddigaha ugu fiican kooxda.
Milkiilaha Kooxda ayaa diyaar u ahaa in uu sameeyo wax walba oo uu United ugu garaaci karo saxiixa xiddiga laakiin Pep Guardiola ayaa ka soo hor jeestay go,aankaas.